IApartment entle eSalzburg eneBalcony
USusan - BELVILLA unezimvo eziyi-3329 zezinye iindawo.
Le ndlu inamagumbi amane okulala ikwindawo yokuhlala eBramberg am Wildkogel eSalzburg, eOstriya. Ilungele iqela okanye usapho lwe-8, ine-balcony kunye negadi encinci yokuhlala.
Ngexesha lasebusika, unokuzonwabisa kwiindawo ze-ski zaseZillertal Arena okanye eKitzbühel. Unako kwakhona inxaxheba kwi toboggan elide ukubaleka eYurophu ngexesha lonyaka. Sikwacebisa ukuba undwendwele iGroßglockner kunye neKrimmler Wasserfallen. Ngelixa iindawo zokutyela ziphumla kumgama oyi-100 m ukusuka kule ndlu, iivenkile eziqhelekileyo zifumaneka kumgama oziimitha ezingama-200.
Indawo yokupaka iyafumaneka kwizakhiwo. Ukufudumeza okuphakathi kwenziwe kule ndawo. Le ndlu ineTV yentambo kunye neWiFi yasimahla. Kukho ikhitshi langoku elinemicrowave, ifriji, kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Ibhedi eyahlukileyo yabantwana inikezelwa apha.
Isikhululo seenqwelomoya saseSalzburg singaphantsi kweyure ezi-2 xa uhamba ngemoto.
Xa ubonisa ivawutsha yakho ngexesha lokungena, uya kunandipha i-10% yesaphulelo kwi-ski-rental e-Sport 2000 Herzog.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (ukugcinwa kweski)
Kumgangatho wesibini: (epasejini, Igumbi lokuhlala(TV(cable)), ikhitshi elivulekileyo(i-cooker(i-ceramic), umatshini wekofu, i-oveni, i-microwave, i-dishwasher, ifriji-ifriji), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini, isitya sokuhlambela), igumbi lokulala(elinye Ibhedi, isitya sokuhlambela), igumbi lokulala(ibhedi enye, ibhedi enabantu ababini, isitya sokuhlambela), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini, iTV, isitya sokuhlambela, ibhedi yabantwana), igumbi lokuhlambela(ishawari, isitya sokuhlambela), indlu yangasese, balcony)
ukufudumeza(phakathi), indawo yokupaka